Momba anay - Beijing Adelic Technologies Co., Ltd.
2001 Niorina ny marika Adelic. Ny vokatra novolavolain-tena dia aseho ao amin'ny Guangzhou Beauty Expo.
2006 Niditra tamin'ny tsena iraisam-pirenena ary nanangana fifandraisana fiaraha-miasa tamin'ny mpandraharaha Tiorka.
2019 Mandraisa anjara amin'ny fampirantiana momba ny hatsaran-tarehy ara-pahasalamana manerantany, mandray anjara amin'ny fihaonambe ara-pitsaboana hoditra breziliana, mahazo ny fankatoavan'ny dokotera ary manatevin-daharana ny drafitra traikefantsika
Adelic dia nanolo-tena tamin'ny fikarohana ara-teknika, fitsapana klinika ary fampivoarana ny teknolojian'ny fitaovana ara-pahasalamana tsara indrindra eran-tany, manome serivisy fitiliana sy fitsaboana mety, azo antoka, azo antoka ary mahomby ho an'ny andrim-pitsaboana ara-pahasalamana manerantany. Amin'ny ho avy, ny orinasa dia hampivelatra mafy ny sehatry ny teknolojia photoelectric sy ny hatsaran-tarehy hoditra mifototra amin'ny teknolojia tamin'ny laser, manome ny tsara indrindra aretina sy ny fomba fitsaboana ho an'ny fampandrosoana ny fahasalaman'ny olombelona amin'ny alalan'ny tena fanapahan-jiro acoustic sy photoelectric teknolojia, ary ho lasa fitaovana. manampahaizana manodidina anao.
Adelic dia orinasan'ny vondrona eo amin'ny sehatry ny cosmetology ara-pitsaboana matihanina, mifantoka amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana, ny varotra ary ny serivisy fitaovana fitsaboana kosmetika nandritra ny roapolo taona mahery. Mandrakotra firenena sy faritra 50 mahery manerana izao tontolo izao ny dian-tongotra fampandrosoana azy. Ny vokatra dia mandrakotra ny fitaovana ara-pahasalamana momba ny hatsaran-tarehy miaraka amin'ny teknolojia fototra toy ny laser, ny onjam-peo ary ny ultrasound ho toy ny antony voalohany.
2001 Niorina ny marika Adelic. Ny vokatra novolavolain'ny tena dia aseho ao amin'ny Guangzhou Beauty Expo.
2011 Fikarohana sy fampandrosoana tamin'ny laser fitsaboana hatsaran-tarehy fitaovana, diode tamin'ny laser, CO2 tamin'ny laser, sns.
2018 Nandray anjara tany Hong Kong, Rosia ary fampirantiana hatsaran-tarehy iraisam-pirenena hafa hanokatra ny tsena Rosiana
Amin'izao fotoana izao dia mbola mazoto mamolavola ny sehatry ny teknolojian'ny photoelectric sy ny fanatsarana hoditra mifototra amin'ny teknolojia laser izahay, manome ny fitsaboana tsara indrindra sy ny fomba fitsaboana amin'ny fampandrosoana ny fahasalaman'ny olombelona, ​​​​ary lasa manam-pahaizana momba ny fitaovana eo anilanao.